Fitsipika sy lalam-panorenana - Fikambanan'ny ivon-toerana manoratra iraisam-pirenena
Ny lalànan'ny Fikambanana dia azo jerena amin'ny fipihana Fitsipika iraisam-pirenen'ny ivotoerana manoratra iraisam-pirenena.
Ny Lalàm-panorenan'ny Fikambanana dia azo alaina amin'ny fipihana eo Lalàm-panorenan'ny Fikambanana Ivom-panoratana Iraisam-pirenena.
Jolay 1, 2013
Andininy I: anarana sy tanjona
Fizarana 1: Ny anaran'ny fikambanana dia ny Fikambanan'ny Ivotoerana Manoratra Iraisam-pirenena, izay antsoina hoe IWCA.
Fizarana 2: Amin'ny maha fivorian'ny Majlis Nasionalin'ny Mpampianatra Anglisy (NCTE), ny IWCA dia manohana sy mampiroborobo ny vatsim-pianarana sy ny fampandrosoana matihanina amin'ny foibe fanoratana amin'ireto fomba manaraka ireto: 1) hetsika sy kaonferansa mpanohana; 2) vatsim-pianarana sy fikarohana mialoha; 3) manatsara ny tontolo matihanina ho an'ny foibe fanoratana.
Andininy II: Mpikambana
Fizarana 1: Misokatra ho an'ny olona mandoa onitra ny mpikambana.
Fizarana 2: Ny firafitry ny trosa dia hapetraka ao amin'ny Bylaws.
Andininy III: Fitantanana: Mpiandraikitra
Fizarana 1: ny tompon'andraikitra dia ny filoha teo aloha, ny filoha, ny filoha lefitra (izay lasa filoha ary ny filoha teo aloha nifandimby enin-taona), mpitahiry vola ary sekretera.
Fizarana 2: Hisafidy ny tompon'andraikitra araka ny voalazan'ny andininy faha-VIII.
Andininy 3: Ny fe-potoana iasan'ny birao dia hanomboka aorian'ny Fifanarahana isan-taona NCTE aorian'ny fifidianana, raha tsy hoe mameno ny fahabangan-toerana (jereo Andininy faha-VIII).
Fizarana 4: Ny fe-potoana iasan'ny filoha lefitra filoha-filoha teo aloha dia roa taona isaky ny birao, tsy azo havaozina.
Fizarana 5: Ny fe-potoana iasan'ny sekretera sy ny mpitahiry vola dia roa taona, azo havaozina.
Fizarana 6: Ireo tompon'andraikitra dia tsy maintsy mitazona ny maha mpikambana IWCA sy ny NCTE mandritra ny fotoana iasan'ny birao.
Fizarana 7: Ny andraikitry ny tompon'andraikitra rehetra dia ireo voalaza ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 8: Ny manamboninahitra voafidy dia azo esorina amin'ny toerany noho ny antony sahaza azy rehefa misy ny tolo-kevitra iraisan'ny Mpiandraikitra hafa sy ny vato ampahatelon'ny birao.
Andininy IV: Fitantanana: Birao
Fizarana 1: Ny Birao dia hiantoka fisoloan-tena amin'ny maha-mpikambana amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo solontena isam-paritra, amin'ny ankapobeny, ary ireo solontena manokana momba ny faritany. Voatendry ny solontenan'ny faritra (jereo Fizarana 3); Amin'ny solontena lehibe sy manokana dia voafidy araka ny voafaritry ny lalàna.
Fizarana 2: Ny fe-potoan'ny mpikambana ao amin'ny Birao voafidy dia roa taona, azo havaozina. Hihitsoka ny fepetra; mba hametrahana stagger, ny halavan'ny fe-potoana dia mety ahitsy vetivety araka ny voalaza ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 3: Ireo mpiaramiasa isam-paritra dia manan-jo hanendry na hisafidy solontena iray an'ny Birao iray avy amin'ny faritra misy azy ireo.
Fizarana 4: Ny filoha dia hanendry mpikambana ao amin'ny Birao tsy mifidy avy amin'ny fikambanana mpamatsy vola voafaritra araka ny voalazan'ny Bylaws.
Fizarana 5: Ny mpikambana ao amin'ny birao dia tsy maintsy mitazona ny maha-mpikambana IWCA mandritra ny fotoana iasany.
Andininy 6: Ny adidin'ny mpikambana ao amin'ny Birao rehetra, voafidy na voatendry, dia voalaza ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 7: Ny mpikambana iray ao amin'ny Birao voafidy na voatendry dia azo esorina amin'ny toerany noho ny antony sahaza azy rehefa nahazo ny tolo-kevitry ny mpiandraikitra sy ny roa ampahatelon'ny Birao.
Andininy V: Fitantanana: Komity sy vondrona miasa
Fizarana 1: Ny komity maharitra dia hotondroina amin'ny Bylaws.
Fizarana 2: Ny komity misahana ny komity, ny vondron-kery, ary ireo vondrona miasa hafa dia hotendren'ny Filoham-pirenena, notendren'ny tompon'andraikitra sy notendren'ny mpiandraikitra.
Andininy VI: Fivoriana sy hetsika
Fizarana 1: Eo ambany fitarihan'ny Komitin'ny kaonferansa, ny IWCA dia hanohana matetika ny hetsika fampandrosoana arak'asa araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana.
Fizarana 2: Ireo mpampiantrano hetsika dia hamafisin'ny Birao ary voafantina arak'ireo fomba fanao voalaza ao amin'ny Bylaws; ny fifandraisana misy eo amin'ny mpampiantrano sy ny IWCA dia ho faritana amin'ny Bylaws.
Fizarana 3: Ny Fihaonamben'ny mpikambana dia hatao ao amin'ny Konferansa IWCA. Raha mbola azo atao dia hanao fivoriana misokatra ihany koa ny IWCA ao amin'ny nf sy ny NCTE. Ny fivoriana ankapobeny hafa dia azo raisina araka ny fahefan'ny Birao.
Fizarana 4: Hivory roa volana ny birao raha azo atao nefa tsy latsaky ny indroa isan-taona; ny kôlejy dia hofaritana ho maro an'isa amin'ny mpikambana ao amin'ny Birao, ao anatin'izany ny tompon'andraikitra telo farafaharatsiny.
Andininy VII: Fifidianana
Fizarana 1: Ny mpikambana tsirairay dia manan-jo hifidy ny mpiandraikitra, ny mpikambana ao amin'ny Birao voafidy ary ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. Afa-tsy izay voalaza manokana ao amin'ny lalàm-panorenana na ny lalàm-panorenana, dia vato tsotra marim-pototra no takiana amin'ny hetsika iray.
Fizarana 2: Ny lalam-pifidianana dia ho faritana ao amin'ny Bylaws.
Andininy VIII: Fanendrena, Fifidianana ary toerana banga
Fizarana 1: Ny sekretera dia hiantso fanendrena; ny mpirotsaka hofidina dia afaka manolotra ny tenany, na izay mpikambana afaka manolotra mpikambana iray hafa izay manaiky hotendrena. Ezahina ny hiantohana ny mpifidy dia afaka misafidy kandidà telo farafahakeliny amin'ny toerana rehetra.
Fizarana 2: Raha te-ho mendrika, ny mpilatsaka hofidina dia tokony ho mpikambana IWCA amin'ny toerana tsara.
Fizarana 3: Ny fandaharam-potoana amin'ny fifidianana dia ho faritana ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 4: Raha banga alohan'ny fotoam-piasana ny biraon'ny filoha, ny Filoham-pirenena teo aloha dia hameno ny andraikitra mandrapahatongan'ny fifidianana fanao isan-taona manaraka izay ahafahan'ny filoha lefitra vaovao voafidy. Amin'ny fanovana isan-taona an'ireo manamboninahitra, ny filoha lefitra mpisolo toerana no handray ny toeran'ny filoham-pirenena ary ny filoha teo aloha dia hamita ny maha filoha teo aloha na ho banga ny birao (jereo Fizarana 5).
Andininy 5: Raha misy biraon'ny Mpanompo hafa lasa banga alohan'ny fotoam-piasana dia hanao fanendrena vonjimaika ireo Mpiandraikitra ambiny mandra-pahatongan'ny fifidianana isan-taona manaraka.
Andininy 6: Raha banga ny toerana misy ny solontenan'ny faritra alohan'ny fe-potoana dia angatahina ny filohan'ny faritra isam-paritra hanendry solontena vaovao.
Andininy IX: Fikambanan'ny ivontoerana manoratra isam-paritra
Fizarana 1: Ny IWCA dia manaiky fa mpiara-miasa aminy ny ivon-toerana isam-paritra fanoratana voasoratra ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 2: Mety hiala amin'ny toeran'ny mpiara-miasa ny mpiara-miasa na oviana na oviana.
Fizarana 3: Ireo faritra vaovao izay mangataka ny hirany dia hajaina amin'ny alàlan'ny latsa-bato maro an'isa an'ny Birao; Ny fizotry ny fampiharana sy ny mason-tsivana dia voatanisa ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 4: Ireo mpiaramiasa isam-paritra rehetra dia manan-jo hanendry na hisafidy solontena iray amin'ny Birao iray avy amin'ny faritra misy azy ireo.
Fizarana 5: Ireo faritra izay tsara laza amin'ny filana dia mety mihatra amin'ny IWCA ho an'ny fanampiana na fanampiana hafa ho an'ny hetsika isam-paritra araka ny voafaritry ny Bylaws.
Andininy X: Fanontana
Fizarana 1: The Writing Center Journal dia ny famoahana ofisialin'ny IWCA; ny ekipa fanonerana dia nofidian'ny sy miasa miaraka amin'ny Birao araka ny fomba fanao voalaza ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 2: Ny Gazety fanoratana lab dia famoahana ny IWCA; ny ekipa fanontana dia miara-miasa amin'ny Birao araka ny fomba voalaza ao amin'ny Bylaws.
Andininy XI: Fifanakalozana ara-bola sy ara-bola
Fizarana 1: Ny loharanom-bola lehibe dia misy ny sandan'ny mpikambana sy ny vola azo avy amin'ireo hetsika notohanan'ny IWCA araka ny antsipiriany ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 2: Ny tompon'andraikitra rehetra dia mahazo alalana hanao sonia fifanarahana ara-bola ary hamerina ny vola lany amin'ny anaran'ny fikambanana araka ny fepetra voalaza ao amin'ny Bylaws.
Fizarana 3: Ny vola miditra sy ny fandaniam-bola rehetra dia hampamoahina ary hotaterin'ny Mpitahiry vola ho fanajana ny lalàna mifehy ny IRS rehetra mifandraika amin'ny toe-karena tsy mitady tombony.
Fizarana 4: Raha rava ny fikambanana, ny tompon'andraikitra dia manara-maso ny fizarana fananana mifanaraka amin'ny fitsipiky ny IRS (jereo Andininy XIII, Fizarana 5).
Andininy XII: Lalàm-panorenana sy lalàna mifehy
Fizarana 1: Ny IWCA dia handray sy mitazona lalàm-panorenana mamaritra ireo fitsipiky ny fikambanana sy andiana Bylaws mamaritra ny fomba fampiharana.
Fizarana 2: Ny fanitsiana ny lalàm-panorenana na ny lalàna dia azon'ny 1) ny Birao atao; 2) amin'ny vato ampahatelon'ny mpikambana manatrika Fihaonambe IWCA; na 3) tamin'ny alàlan'ny fanangonan-tsonia nosoniavin'ny mpikambana roapolo ary natolotra ny filoham-pirenena.
Fizarana 3: Ny fanovana ny lalàm-panorenana dia ampiharina amin'ny roa ampahatelon'ny vato azon'ny mpikambana.
Fizarana 4: Ny fananganana sy fanovana ny lalàna mifehy dia apetraka amin'ny latsa-bato roa ampahatelon'ny ankamaroan'ny Birao.
Fizarana 5: Voasoratra ao amin'ny Andininy faha-VII ny lalam-pifidianana.
Andininy XIII: Fitsipika IRS hitazonana ny toerana tsy misy haba
Ny IWCA sy ireo mpiara-miasa aminy dia hanaja ny fepetra takiana mba ho afa-mivoaka amin'ny maha Organisiona voafaritra ao amin'ny fizarana 501 (c) (3) ao amin'ny kaody anatiny:
Fizarana 1: Ny fikambanana voalaza dia nalamina manokana ho an'ny asa soa, fivavahana, fanabeazana na ara-tsiansa, ao anatin'izany, ho an'ny tanjona toy izany, ny fanaovana fizarana amin'ireo fikambanana mahafeno fepetra eo ambanin'ny fizarana 501 (c) (3) ao amin'ny kaody anatiny, na ny fizarana mifanaraka amin'ny kaody federaly ho avy.
Fizarana 2: Tsy misy ampahany amin'ny karama azon'ny fikambanana raha te handray soa amin'ny tombontsoany, na azo zaraina amin'ireo mpikambana ao aminy, mpiambina, tompon'andraikitra na olon-tsotra hafa, afa-tsy ny fikambanana ary omena fahefana sy fahefana handoa onitra sahaza ny serivisy. nanao sy nanao fandoavam-bola ary fizarana ho fampandrosoana ny tanjona voalaza ao amin'ny fizarana 1 ato sy amin'ny andininy faha-1 amin'ity lalam-panorenana ity.
Andininy 3: Tsy misy ampahany lehibe amin'ny hetsiky ny fikambanana raha manao fampielezan-kevitra, na manandrana mitaona lalàna, ary ny fikambanana dia tsy handray anjara, na hiditra an-tsehatra (ao anatin'izany ny famoahana na fizarana fanambarana) izay fampielezan-kevitra politika. amin'ny anaran'ny na amin'ny fanoherana ny kandidà ho amin'ny birao-panjakana.
Andininy 4: Na eo aza ny fepetra hafa ao amin'ireto lahatsoratra ireto, ny fikambanana dia tsy tokony hanao hetsika hafa tsy avela hotohizan'ny (a) fikambanana iray tsy andoavan-ketra amin'ny fidiram-bola federaly araka ny fizarana 501 (c) (3) amin'ny vola miditra anatiny. Kaody, na ny fizarana mifanitsy amin'ny kaody momba ny hetra federaly ho avy, na (b) ataon'ny fikambanana, ny fandraisana anjara azo alaina amin'ny fehezan-dalàna 170 (c) (2) amin'ny kaody anatiny, na ny fizarana mifanaraka amin'ny hetra federaly ho avy kaody
Fizarana 5: Rehefa rava ny fikambanana, ny fananana dia zaraina ho an'ny tanjona iray na mihoatra noho ny hevitry ny fizarana 501 (c) (3) ao amin'ny fehezan-dalàna anatiny, na ny fizarana mifanaraka amin'ny kaody momba ny hetra federaly ho avy, na dia haparitaka amin'ny governemanta federaly, na amin'ny fanjakana na eo an-toerana, ho an'ny daholobe. Izay fananana rehetra tsy voaroaka toy izany dia alain'ny Fitsaran'ny fahefana mahefa any amin'ny distrika misy azy ny birao lehiben'ny fikambanana, natao manokana ho an'ny tanjona toy izany na ho an'ny fikambanana na fikambanana toy izany, araka ny voalazan'ny Fitsarana, izay voarindra sy miasa manokana ho an'izany tanjona izany.